08:48:08 am 13-May-2021
सुरेन्द्र/युवापोस्ट – एकपटक एउटा किसानको घोडा बिरामी भएछ । उसले त्यसको उपचारको लागि डाक्टरलाई बोलायो । डाक्टरले घोडालाई राम्रो सित नियाल्दै भने ” तपाइको घोडालाई धेरै गम्भीर बिरामीले समातेको छ । मैले तीन दिन सम्म यसलाई औषधि दिएर हेर्छु । यदि ठिक भयो भने ठिकै छ नत्रभने यसलाई हामीले मार्नुपर्छ किनकी यसको बिरामी अरु जनावरहरुमा पनि सर्नसक्छ ” । यो सबै कुराकानी छेउमै बसेको एउटा खसीले पनि सुनिरहेको थियो । अर्को दिन डाक्टर आए र औषधि दिएर फर्किए ।
उ गइसकेपछी खसी घोडाको छेउमा गयो र भन्यो ” उठ साथी हिम्मत गर नत्र यिनीहरुले तिमिलाई मारिदिन्छन ” दोस्रो दिन फेरि डाक्टर आए र औषधि दिएर फर्किए । खसी फेरि घोडाको छेउमा गयो र भन्यो ” साथी तिमिलाई उठ्नैपर्छ, हिम्मत गर, नत्रभने तिमी मारिन्छौ । म तिमिलाई मदत गर्छु ल उठ । ”
तेस्रो दिन जब डाक्टर आए तब किसानलाई भने, “मलाई अफसोस छ अब यसलाई मार्नुपर्छ किनकी कुनैपनी सुधार नजर आइरहेको छैन ।”
जब डाक्टर त्यहाबाट गए, तब त्यो खसी फेरि घोडाको छेउमा गयो र भन्यो ” देख्यौ साथी, अब तिम्रो लागि गर या मर भन्ने स्थिती आइसकेको छ । त्यसैले हिम्मत गर उठ्ने । यदि तिमी आज उठ्न सकेनौ भने अवस्य मारिन्छौ । त्यसैले हिम्मत गर , प्रयास गर । घोडा जुरुक्क उठ्छ, खसीले भन्छ – हो ! स्याबास, अब भागेर हेर तेज अझै तेज । स्याबास ! त्यतिकै मा किसान आउछ र उसले देख्छ कि घोडा अब उठेर दौडीरहेको छ ।
उ खुशीले नाच्न थाल्यो र घर परीवार र छिमेकीलाई जम्मा गरेर खुशिले चिच्याउन थाल्यो “चमत्कार भयो, मेरो घोडा ठिक भयो, यसको खुसीमा हामीले उत्सब पार्टी मनाउनुपर्छ, आज घरको खसि काट्छु र सबैलाई खसिको बिर्यानी खुवाउछु” | खसि काटिन्छ र भव्य भोज हुन्छ। जस्ले अरुको भलो गर्दै हिड्छ उसैलाई झन ठूलो बज्रपात परेको हुन्छ यहाँ !